MPITONDRA VOAFIDY Vakio ihany koa
Tontosa omaly Alahady 14 Oktobra 2012 ny fanompoam-pivavahana ho fisaorana an’ Andriamanitra noho ny fahavitan’ny SYNODA LEHIBE XVII. Tao amin’ny FJKM Isotry Fitiavana no nanatanterahana izany , ka ny Mpitandrina RAMAHOLIMIHASO Solofo no nitarika ny fotoana ary ny Mpitandrina RASENDRAHASINA Lala Haja , Filohan’ny FJKM no nitondra ny Tenin’ Andriamanitra .
Hafatry ny Tenin’ Andriamanitra :
MATIO 24 :23
“ Koa raha misy manao amnao hoe : Indro aty Kristy na indro ary, aza mino hianareo”
Teny fampitandremana izany manoloana ny hevitra manodoka , ny fitarihana samihafa , Misy ireo izay miseho ho tia ny fiangonana nefa tsy araka izany ny ataony (toy ny fanakatonana ny onjam-peon’ny fiangonana…). Tsy mahatsiaro ny maha-mpamitaka sy ny maha-sandoka azy izy. Aza mino azy ianareo . Maro ny mpanararaotra rehefa mafy ny olana . Tafalatsaka amin’ny fahadisoam-panapahan-kevitra ny olona toy izany .Aza mety ho voafitaky ny fisalasalana ianareo . Aoka hitandrina manoloana ny fotom-pampianarana samihafa.Tokony hijoro tsara ny fiangonana .
Asa vavolombelona : Teny fisaorana sy fankasitrahana ireo tompon’andraikitra MF teo aloha no nanombohana ny fandraisam-pitenenan’ ny Filohan’ny FJKM.
Avy eo dia nandray tànana ny Filohan’ny FJKM ny Filohan’ny Synoda Lehibe , ny Mpitandrina Irako Andriamahazosoa Ammi noho ny naha-voafidy azy indray hitondra ny Fiangonan’I Jesoa Kristy eto Madagasikara mandritra ny efa-taona manaraka .
Rehefa izay , dia nandray tànana ireo Biraon’ny Mpiandraikitra Foibe vaovao kosa ny Filohan’ny FJKM sy izy 80 mianadahy voafidy ho MF mpiara-mandinika sy mpihevitra ny asan’ny FJKM ary dia niarahaba ireo mpanatanteraka vao voafidy indray eo amin’ny toerany avy , dia ireto izany :
Ny Sekretera Jeneraly : MARINASY Mpitandrina ,
Ny TDF : Andriamatoa RADIMISAON Jonah , Mpitandrina
Ny TDS : Ramatoa RATSIMBA Prisca Hanta
Ny TDMV : Ramatoa RATSIMBAZAFY Holiarisoa
Izany rehetra izany dia nohamafisina tamin’ny fitondrana amam-bavaka ireo mpanompon’ Andriamanitra vao voafidy ireo , mba hahefany an-tsakany sy an-davany ny andraikitra apetraky ny fiangonana aminy . Teo am-pamaranana ny teniny no nanaovany fisaorana ny fiangonana sy ny fikambanana samihafa izay nitoto nahafotsy sy nahandro nahamasaka ka nahalavorary iny Synoda Lehibe iny , isika rehetra nitondra am-bavaka andro aman’ alina , taloha sy nandritra ny SL .Mampahery antsika fiangonana tsirairay amin’ny fiaraha-misalahy hahatanteraka ny fikasan’ Andriamanitra . isaorana ny FJKM Isotry Fitiavana , ny Mpitandrina mivady, ny Diakona ao aminy , ny mpitendry zava-maneno , isika mpianakavin’ny finoana .Nanafana ny fotoana ny Taniketsa FJKM Tranovato Ambonin’ Ampamarinana izay isaorana manokana .
Ho tanteraka tokoa ny Teny faneva hoe :" FA NY FANANTENANA NO NAMONJENA NY MINO" Romana 8:24a . .